Ubuntu 18.x na avo kokoa: vahaolana raha toa ka tsy mety aminao ny fitambarana Alt + Imp Pant + REISUB | Avy amin'ny Linux
Ubuntu 18.x na avo kokoa: vahaolana raha toa ka tsy mety aminao ny fitambarana Alt + Imp Pant + REISUB
Fantatrao anefa izany Miorina mafy i Ubuntu, tsy voatery adala foana. Indraindray, ny rindranasa na bug dia mety manantona ny rafitra ary tsy mamela anao handefa ny console hampandehanana ny solo-sainanao sns. Amin'ireo tranga faran'izay mafy izay tsy misy outputo hafa ireo, fa tsy famonoana ireo fitaovana amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fihazonana ny bokotra on / off na miaraka amin'ny bokotra reset dia manana safidy hafa ianao.
Ity safidy ity dia ny manindry fitambarana fanalahidy araka ny maha izy azy ireo Alt + Print Screen + REISUB. Izany no mahatonga ny rafitra hamaly sy hamerina ny fiverenana hivoaka amin'izany fanjakana mangatsiaka izany. Aza adino fa tsy maintsy tazoninao ny bokotra Alt + Print Screen ary avy eo dia azonao atao ny manindry ireto fanalahidy manaraka ireto tsy mila mitazona azy rehetra amin'ny fotoana iray (mazava ho azy): R, E, I, S, U, ary B. Ny olana dia mety tsy mandeha amin'ny kinova Ubuntu ...
Ny ataon'ity asa ity dia ny mampihetsika a SysReq (System Request) na fangatahana amin'ilay rafitra ho an'ny kernel hamaly izany fangatahana izany ary, amin'ity tranga ity, avereno ny rafitra nivaingana. Ny lakile dia ampiasaina:
A: Mamerina ny fibaikoana amin'ny klavie na unRaw.
E: Atsaharo ny fizotra rehetra na ny tErm.
I: vonoina ny fizotrany mbola miaina na fullkIll.
S: Ampifanaraho ireo kapila na Sync.
U - Ampidiro ho toy ny read-only na Umount fotsiny ny rafitra fisie rehetra.
B: avereno indray ny solosaina na reBoot.
Raha tsy mandeha amin'ny alàlan'ny toerana misy anao ny kinalan'ny rafitrao dia afaka amboarina mora foana izy io. Ho an'ny mampihetsika azy ary manatrika ny filaharana ny rafitra izay manaraka ny Alt + Imp Pant mba hanao asa samihafa (satria misy mihoatra ireo nasehoko), dia ataonao izao manaraka izao:
Safidy iray hafa ny fampiasana ity baiko manaraka ity izay mety hisy ny vokany mitovy:
Aza adino fa noho ny baiko teo aloha dia mila tombontsoa ianao, koa ataovy amin'ny alàlan'ny sudo na, raha tsy izany, ho faka.
Ary manomboka izao dia tokony handeha ny fampifangaroana fototra ... Tadidio fa raha manova azy ao amin'ny rakitra / proc / sys / kernel / sysrq ianao dia handeha izany, fa tsy ho tafavoaka izany rehefa hamerina ny rafitra ianao, dia hanana izany ianao hanova azy indray. Izany hoe, tsy maharitra.
Misimisy kokoa momba ny majika SysRq
Ny nataonao tamin'ny baiko avy amin'ny fitaovana teo aloha dia ny fanovana ny fikirakirana kernel hametrahana azy amin'ny sanda 1 izay ahafahan'ny SysRq rehetra miasa. Saingy tokony ho fantatrao fa misy izany soatoavina mety hafa, raha te hampiasa azy ireo ianao:
0 - Esory tanteraka ny SysRq.
1 - Alefaso ireo fiasa SysRq rehetra.
> 1: saron-tava bitika hamela fiasa sasany:
2: ahafahana mifehy ny console amin'ny sehatry ny hazo.
4: alefaso ny fibaikoana fitendry (SAK, esory)
8 - Alefaso ny fanodinana debug sns.
16: alefaso ny baiko fampandrenesana.
32: mamela ny remount amin'ny fomba famakiana fotsiny.
64: mamela ny fizotran'ny signaling (fehezanteny, mamono, mamono olona)
128: avelao ny reboot / poweroff.
176 - Mamela ny fampifanarahana fotsiny, mamerina ary mamerina amin'ny fomba famakiana fotsiny.
256: mamela ny fanamarihana ny lahasa RT rehetra
Izany koa dia nilaza misy lakile hafa majika ankoatry ny R, E, S, I, U, B, izay azonao ampiasaina hanaovana fangatahana sasany amin'ny rafitra fiasa. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny filaharana toa ny RESIUB, fa koa mitoka-monina, toa ny Alt + Screenprint + S, Alt + Screenprint + B, sns. Ary mba hahalalanao fa mety bebe kokoa, ity misy lisitra iray:
B: avereno indray ny solosaina tsy azo antoka. Izany hoe, raha tsy ampiarahina amin'ny buffer disk, na esory ny fizarazaran-tsoavaly. Mety hanjary ho very ny angona na ho simba ny sasany izay nosoratana tamin'izany fotoana izany. Izy io dia toy ny fanindriana ny bokotra famerenana amin'ny laoniny na fanindriana ny bokotra ON / OFF an'ny fitaovana hafa azo entina na AIO
C: manery fianjerana, manary ny fahatsiarovana ny rafitra lehibe ao anaty kapila.
D: hametaka ny hidin-trano.
E: mandefa famantarana SIGTERM amin'ny fizotrany rehetra afa-tsy ny init / systemd / upstart,… Izany hoe, mamono ny fizotran-javatra rehetra izy io afa-tsy io iray io.
F: miantso OOM Kill, hamaha tranga sasany rehefa tsy tadidy intsony ilay rafitra.
G: miditra amin'ny mode debug console, amin'ny fampiasana framebuffer.
H: hampiseho fanampiana amin'ny fampiasana SysRq.
J: manery ny fiakaran'ny rafitra fisie na rafitra fisie amin'ny fampiasana FIFREEZE.
K: vonoy daholo ny fizotran'ny console ampiasainao. Anisan'izany koa ny sary.
L: mampiseho backtrace stack an'ny CPU mavitrika rehetra ao amin'ny rafitra. Raha misy tsy miasa na sembana amin'ny tanana, dia tsy hampiseho na inona na inona momba azy ireo izany.
M: mampiseho fampahalalana avy amin'ny fahatsiarovanao.
N: mamerina amin'ny laoniny tsara ho an'ny dingana rehetra amin'ny laharam-pahamehana sy RealTime. Hanalefaka ny olana amin'ny fifanolanana amin'ny loharanon-karena izany.
Na: hanidy tanteraka ny solosaina. Izany hoe, tsy matory toy ny ajanona.
P: mampiseho fisoratana anarana sy saina.
F: asehoy ny timer miasa sy ny loharano famantaranandro.
A: Ovao ny maody fitendry amin'ny RAW ho XLATE.
S: hampifandray ireo buffer an'ny disk na disks izy ireo, izany hoe ireo fahatsiarovana izay mitahiry ny fidirana fidirana hatao. Ka tsy ho simba ny angon-drakitrao raha esorinao ny mpamily na averinao tampoka tampoka izany.
T: mampiseho ny lisitry ny lahasa.
U: ovao ny maodely fitomboan'ny fizarazarana ho vakiana fotsiny na hamaky fotsiny.
V: tereo ny famerenana ny console framebuffer.
W: mampiseho anao ny lisitry ny lahasa voasakana.
Spacebar: hampiseho ny bokotra SysRq majika misy amin'ny solosainao.
Aza adino fa tsy ireo rehetra ireo no hiasa amin'ny endriny rehetra ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ubuntu 18.x na avo kokoa: vahaolana raha toa ka tsy mety aminao ny fitambarana Alt + Imp Pant + REISUB
Tsy RESIUB io fa REISUB.
Asunción dia hoy izy:
Nampiasako ny raikipohy Alt + Print Screen + REISUB, fa miseho indray ilay efijery iray: toy ny terminal misy serizy maromaro. Niseho izy ireo taorian'ny nataoko fanavaozana ny ubuntu 18.04. Pikantsary tsy mihetsika io. Tsy avelako hitendry zavatra aho, ary tsy afaka miditra amin'ny efijery an-trano.
Mamaly an'i Asuncion
Manaja ny fanapaha-kevitrao tsy hizara ny toerana misy anao ny Facebook, fa kosa manamafy ny fahefany ary manohy manara-dia anao
Mpampiasa Facebook manodidina ny 267 tapitrisa no voakasiky ny fandikana data